नेटिभ विज्ञापन: तपाइँको उत्पादनहरु लाई बढावा दिनको नयाँ तरीका | Martech Zone
यदि तपाईं सकारात्मक उत्पादनहरूको मार्गमा थोरै समयका साथ आफ्ना उत्पादनहरू मार्केटि been गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो हुनसक्दछ यो तपाईंले विचार गर्नुभएको समय हो नेटिभ विज्ञापन तपाईंको समस्याहरूको स्थायी समाधानको रूपमा। नेटिभ विज्ञापनहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ, खास गरी जब यो तपाईंको अवस्थित सामाजिक मिडिया विज्ञापनहरू बढावा दिने साथै उच्च सामग्री लक्षित प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको सामग्रीमा ड्राइभ गर्न। तर पहिले, यस मा डुबुल्की मारौं के हामी सोच्नु अघि नेटिभ विज्ञापनको कसरी.
एक नेटिभ विज्ञापनको सबै भन्दा बढी प्रयोग गरिएको परिभाषा द्वारा एक हो सामग्री मार्केटिंग संस्थान, जसले देशी विज्ञापन वर्णन गर्दछ:
भुक्तान गरिएको विज्ञापनको कुनै पनि प्रकारले जानकारी प्रदान गर्दछ जुन अत्यधिक लक्षित, रोचक, र तपाईंको दर्शकहरूको लागि उपयोगी छ कि यो गैर-विज्ञापन वा मूल सामग्रीबाट भिन्न छ।
यो यस्तो तरीकाले विज्ञापन गरिन्छ कि तपाईंको दर्शकले सामग्रीको विज्ञापनको रूपमा तुरून्त व्याख्या गर्दैन तर यसलाई नियमित सामग्रीको रूपमा देख्दछ। थप रूपमा, सामग्री पहिले नै दुबै उपयोगी र तपाईंको दर्शकहरूको लागि रोचक छ ताकि यो हस्तक्षेप वा अफ-पुथिंग जस्तो देखिँदैन।
नेटिभ विज्ञापनहरू धेरै फरक आकार र आकारमा आउँछन्। तपाई यसलाई गुगलमा सशुल्क खोजी परिणामहरूको रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यसलाई सोशल मिडियामा फेसबुकमा प्रायोजित वा पदोन्नत पोष्टको रूपमा, लिked्कइनमा प्रायोजित अपडेटहरू, र ट्विटरमा प्रचारित सूचिहरूको रूपमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले न्यु योर्क टाइम्स, हफिंगटन पोष्ट, बजफिड र फोर्ब्स जस्ता उच्च अधिकार साइटहरूमा लेख पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो मूल विज्ञापन गर्न सामग्री सिफारिश इञ्जिनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यी सबै इन्टरनेटबाट सिफारिस गरिएका लेखहरूको सूची हुन् जुन तपाईं केही वेबसाइटहरूमा पढ्नुहुने लेखहरूको तल देखा पर्छ।
त्यसो भए तपाईं कसरी आफ्नो मार्केटिंग अभियानमा नेटिभ विज्ञापनहरू एकीकृत गर्नुहुन्छ?
स्पष्ट लक्ष्य राख्नुहोस्
नेटिभ विज्ञापनका धेरै फाइदा हुन्छन् जे भए पनि जुनसुकै फारम लिनुहोस्। ती मद्दत गर्न को लागी तपाइँको ब्रान्ड को लागी जागरूकता र विश्वास निर्माण गर्न को लागी मद्दत गर्न को लागी तपाइँ तपाइँको सामग्री को लागी अधिक ग्राहकहरु लाई मद्दत गर्न सक्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा यो हो कि तपाइँले सँधै नयाँ सामग्रीलाई बिर्काउन हुँदैन। तपाईले पहिले नै प्रकाशित गर्नुभएको पोष्टहरूको प्रयोग गरेर तपाईं नयाँ दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ अन्य लाभहरू छन् जुन तपाईं स्वदेशी विज्ञापनहरूसँग पाउनुहुन्छ, जस्तै सोशल प्रुफ र तपाईंको ब्रान्डको लागि प्रभावी एसईओ। नेटिभ विज्ञापनहरूले अधिक परम्परागत ब्यानर विज्ञापनहरूको विपरीत मनपराउँदछ र टिप्पणीहरूको रूपमा सामाजिक प्रमाण संकलन गर्दछ। जब तपाइँ एक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा तपाइँको पोष्ट प्रचार गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको सन्देश एक ठूलो दर्शकहरु लाई प्रस्तुत गर्न को लागी आउँछ, यसको मतलब तपाइँ तपाइँको ब्लग वा तपाइँको वेबसाइट को लागी अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्नुहुन्छ। नेटिभ विज्ञापन विशेष गरी उपयोगी छ जब तपाइँ भर्खर सुरू गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँको एसईओ छैन अभी सम्म क्रम मा।
नेटिभ विज्ञापनबाट प्राप्त हुने सामाजिक प्रमाणको प्रकारको साथ, तपाईंको सन्देश अधिक विश्वसनीय देखिन्छ र त्यसैले भाईरल हुने बढी सम्भावना देखिन्छ। जब धेरै व्यक्तिहरू तपाईंको ब्रान्ड बारे सचेत हुन्छन्, यसले सामाजिक संकेतहरू र लिंकहरूको रूपमा तपाईंको ब्रान्डको लागि उच्च अधिकारमा अनुवाद गर्न सक्दछ, जसले तपाईंको साइटलाई उच्च स्थानमा राख्न मद्दत गर्दछ।
नेटिभ विज्ञापनको साथ तपाई सामाजिक मिडियामा श्रोतालाई ठुलो मात्रामा बढ्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक र ट्विटरमा तपाईंको प्रायोजित पोष्ट नयाँ अनुयायी र मनपराउँदछ, यदि मात्र यदि सामग्री दर्शकहरु संग प्रतिध्वनि गर्दछ।
मात्रा भन्दा पहिले गुणस्तर
तपाइँको नकरात्मक विज्ञापनबाट अधिक पाउनको लागि, तपाइँले सामग्री सिर्जना गर्नुपर्नेछ जुन तपाइँको पाठकलाई मूल्य प्रदान गर्दछ, रमाईलो छ, र ध्यान आकर्षित गर्दछ। एरिन स्नाइडर, एक अनलाइन सस्तो निबन्ध लेखन सेवाका सम्पादक, भन्छन्,
तपाइँ जे गर्नुहुन्छ, त्यस्तो सामग्री नबनाउनुहोस् जस्तो लाग्छ कि तपाइँ तपाइँको उत्पादनलाई पिच गर्दै हुनुहुन्छ। व्यक्ति खुला बेच्न मनपराउँदैनन्।
सुरू गर्नका लागि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले तपाईंको वेबसाइटमा नेटिभ विज्ञापनमा सामग्री प्रकाशित गर्नुभयो। तपाईंले सामग्रीको गुणस्तर उच्च छ भनेर निश्चित गर्नु पर्दछ, यसले कार्य गर्न कल समावेश गर्दछ, र यो राम्रो श्रोतालाई लक्षित छ कि यो एकदम विघटनकारी फेला पार्दैन।
लक्ष्यीकरणको राम्रो प्रयोग गर्नुहोस्
सँधै प्रयोगकर्ताहरूको लागि जानुहोस् जुन या त तपाईंको ग्राहकहरू वा तपाईंको ग्राहकहरूसँग मिल्दो नै छ। तपाईंले आफ्नो फाइदाको लागि retargeting प्रयोग गर्नुपर्दछ, व्यक्तिहरूको लागि जाँदै जो तपाईंको वेबसाईटमा पहिल्यै भ्रमण गरिसकेका छन् तपाईंको कुनै पनि उत्पादनहरू वा सेवाहरू हेर्नका लागि।
नेटिभ विज्ञापनहरू सोशल मिडियाको बाहिर काम गर्दछ, पनि
हामीले सुरूमा नै भनेझैं नेटिभ विज्ञापनमा सामाजिक मिडियामा पदोन्नत पोष्टहरू मात्र समावेश छन्। तपाईं शीर्ष मिडिया साइटहरूमा फोर्ब्स र बज फिडमा प्रायोजित लेखहरू लेख्न पनि सक्नुहुनेछ। यी पोष्टहरूले तपाईंको ब्राण्डमा ध्यान आकर्षण गर्दछ र तपाईंको ब्राण्डको बारेमा अवस्थित नकारात्मक धारणा पनि बदल्न सक्छ।
तपाइँको बजेट कति तंगमा निर्भर गर्दै, तपाइँले सामग्री सिफारिस सेवाहरू उपयोगी पाउनुहुनेछ। तिनीहरूले एक विशाल प्रकाशकको ​​साइट भित्र राखेर तपाईं आफ्नो सामग्रीमा प्राप्त हेराइहरूको संख्या वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ।
जहाँसम्म तपाईं यसलाई हेर्नुहुन्छ, नेटिभ विज्ञापन एकदम उपयोगी छ, मार्केटर्सको बहुमतले अहिले यसलाई सक्रियतापूर्वक प्रयोग गरिरहेको छ। यो नयाँ दर्शकहरू समात्न र तपाईंको ब्रान्ड बाहिर निकाल्ने उत्तम तरिका हो।
टैग: नेटिभ विज्ञापनउत्पादन पदोन्नतिनेटिभ विज्ञापन के हो